Wonke wesithathu German ingqalelo cryptocurrencies-mali - Blockchain News
Wonke wesithathu German ingqalelo cryptocurrencies-mali
Nakuba Bitcoin, Ethereum and Co. ihlaselwe ezingamaphepha ukuy ixabiso kutshanje, udumo lwabo alukwazanga awabulawa. A lilonke 29 ekhulwini abemi German ukubona imali digital-mali umdla. Le saveyi ummeli kwimeko ka YePosi Study Digital 2018 zenzeka phakathi ekupheleni kukaFebruwari ekupheleni kukaMatshi, okt ngokukhawuleza emva kokuba ixabiso ngamanye amaxesha elibukhali kakhulu uwa iimali digital. Ukuthi ngqo, ukuzimela iinkqubo zemali zolawulo kunye nethemba imbuyekezo eziphakamileyo langa nomdla omkhulu amaJamani. Umdla ka amaJamani abaselula kunye oqhelekileyo uwuse kwi affine ngokukhethekileyo ngokuthi. Kwiqela ubudala phakathi 18 yaye 34, umntu omnye ezimbini (46 ekhulwini) unomdla cryptocurrencies-mali – nangona iingxelo bavame negative.
phambi Media kwandisa umdla Bitcoin and Co
Kunyaka ophelile, rates cryptocurrency lasuka phezulu enye irekhodi ukuya elilandelayo, kodwa ukusukela ekupheleni 2017, intengo Bitcoin, zezona lwimi zisetyenziswa cryptocurrency, uwile ngaphezu 65 ekhulwini. Amajelo ingxelo ngokubanzi malunga nokunyuka kwamaxabiso kunye nabameli ezininzi kushishino bathetha izilumkiso; ezifana Deutsche Bundesbank okanye German Financial okugada Authority Bafin. Amazwi ingcali, ngubani wayethe inguquko yi cryptocurrencies kwishishini investment, nayo yaba ukuzola kakhulu.
“Kuyaphawuleka ukuba baseJamani usenomdla cryptocurrencies njenge investment zemali nangona ilahleko aphezulu kunye neengozi ezicacileyo,” Dr uthi. Thomas ukunqongophala, YePosi IGosa eliyiNtloko Digital. “Kukho Ngokuqinisekileyo sikumngcipheko wokuba abantu uya kulahlekelwa yimali ngenxa nje yokuba zilandela bebabaza.” Bitcoin yaba cryptocurrency wokuqala 2009, kwaye ngoku kukho ngaphezu 1,500. ulawulo lwedatha amagunya neminqophiso cryptographically lukhuselekile ukudala iintengiselwano intlawulo lwedijithali ngaphandle abasemagunyeni esembindini ezifana iibhanki.
Abasetyhini ziyathabatheka ukuzimela inkqubo, amadoda ngamathuba ukubuyela
Ngokukhethekileyo geqe iinkqubo zemali esekwe ukuba owuthanda amaJamani malunga cryptocurrencies. Lo mba ngokubonakalayo kubaluleke kakhulu kwabasetyhini (60 ekhulwini) kunokuba abantu (51 ekhulwini). Ithemba imbuyekezo ekuthiwa eliphezulu, kwelinye icala, ikakhulu Iyandikruqula abantu (56 ekhulwini xa uthelekiswa 36 epesenti abantu basetyhini). Kuba fan zonke yesithathu cryptocurrencies, yokufihla kubalulekile. Ngokungafaniyo, umzekelo, izabelo corporate, abazimele ayikho umdla. Nge libe lilifa emzimbeni cryptocurrencies akukho mqeshwa yebhanki okanye umthengisi uye ingqiqo yokugcina. Kuba umntu wonke yesihlanu onomdla, kukho izizathu iimvakalelo ezifana uchulumancile kunye “imvakalelo digger igolide” imali ngendlela entsha ye investment digital.
Lwaya nabantu abatsha ingakumbi enkulu
Inyathelo kutyalomali senziwa ingakumbi ngabantu abatsha. At ngeepesenti ezintandathu, bendawo yedijithali kufuneka cryptocurrencies kabini abaninzi avareji labantu. Kwiinyanga ezilishumi elandelayo, elinye 14 ekhulwini 18- abantwana abaneminyaka-34 usafuna ukukhula cryptocurrencies. Kuwo onke amaqela ubudala, le pesenti ezisibhozo kuphela. “Phezu kwayo yonke lwaya, abatyali-mali abatsha kufuneka singalahlekani-NMMU ukusuka kwindlela yogcino esekwe. Nabani na kakade yenza utyalo ngokhuselo-mali kufuneka ngokuqinisekileyo enganagalelo cryptocurrencies ngenxa lwemingcipheko ezixhomisa. Ngenxa olu hlobo lotyalo ngumyinge, “uyaqhubeka Thomas Mangel.
Ulwazi malunga namathuba kunye neengozi kungenzeka babebiza imali
Ukungalingani ixabiso eliphezulu cryptocurrencies kwakunye nezicwangciso ngokuthi kweebhanki wabazingeli okanye namazwe ukumisa cryptocurrencies zabo ziye zakhokelela ekubeni kudalwe abezindaba abasingethe. Iziphumo zophononongo zibonisa ukuba le ubukho eendaba kukhokelela baseJamani abaninzi bagqibe ukuba bakufundile cryptocurrencies – ngenxa yokuba sele ufundile okanye uve kakhulu ngazo. 20 ekhulwini baseJamani aqinisekise ngokwabo ulwazi elungileyo okanye kakuhle kakhulu cryptocurrencies. Bendawo digital bazive bekhuselekile kude emhlabeni: 29 ekhulwini 18- abaneminyaka engama-34 ukuya Bazibona “iingcali ze crypto”.
“Ngenxa hypes eendaba, Abantu abaninzi zazi ulwazi lwabo amathuba kunye iingozi cryptocurrencies-mali,” ulumkisa Thomas Mangel. Umzekelo, amaninzi azi ukuba iingeniso ukusuka cryptocurrencies kufuneka irhafu ngokupheleleyo xa igcinwa kangangonyaka ubuncinane. Ngaphezu koko, esichengeni iyonke, apho kungekho ezinye utyalomali kule fomu, akukho ngqalelo ngokwaneleyo. Nabani na ongathanda ukuba imali cryptocurrencies, kunjalo, kucetyiswa ukuba ukhethe kuphela isiphumo ukuba angenza ntoni ngaphandle.
ulwazi Imvelaphi kwi-Postbank Study Digital 2018 – I-Digital German kunye Money
Kweli thuba ukususela ngoFebruwari ukuya kuMatshi ka kulo nyaka, 3,100 BaseJamani indlebe ukuba Postbank Study Digital 2018 – I-Digital German kunye Money. Ngokuba lixesha yesine emgceni, ukufunda yePosi xa ulinganisa nophuhliso ezisakhulayo ngayo kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi German ngokunxulumene yedijithi kwizihloko jikelele kunye nemali ingakumbi. Ukuze ezibonisa ubume inani ezimele, isampulu weighted ngu wombuso (proportionalization), yobudala kunye nesini. Ifayile reference lusekelwe Census 2011 yeOfisi Statistical Federal. Iziphumo isondezwa amanani apheleleyo. Ezinxaxhileyo kwi iitotali kungachazwa iiyantlukwano ukuqoqa.
Price ogcwele: Kakhulu...
Isilimela 19, 2018 e 5:09 PM
EyeKhala 21, 2018 e 7:31 PM